Nzuzo na Okwu - WoopShop ®
Zụrụ na Nkwenye | Nkwụghachi ụgwọ ego nkịtị
Refunds &-alaghachi Policy
Nzuzo & Usoro
Ibu Ọrụ Ndị Ọrụ
AllBaby & KidsNgwa & NgwaAhụike na MmaHome & KitchenEgwuregwu EgwuregwuUwe nwokeEgwuregwuNa-eme EgoN'okpuru $ 9.99Uwe nwanyi
Dollar US Euro Canadian dollar Ahịa Australia British Pound Indian Rupee Ukraine Hryvnia Turkish Lira Japanese yen Swiss Franc Danish Krone Russia Ruble Bulgarian Lev Polish Zloty Serbian dinar Belarusian Ruble Denar nke Masedonia Albanian Amalek Georgian Lari Hungarian Forint Kuna Croatia Iceland Krona New Manat nke Azerbaijan Kazakhstan Tenge Moldovan Leu Brazil Real Mexico peso Argentine peso Nuevo Sol Peruvian South-Korea Won South African Rand Malaysian Ringgit Indonesian Rupiah Philippine peso Dollar Carribean nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Emirates Dirham Saudi Riyal Omani Rial
Kaadị / MXN0.00 0
Ngwa & Anya
Akpa & Wallets
Ejiji Ndị Mmadụ
Ahụike na Mma
Ngwa & Ngwa
ekwentị mkpanaaka na
Ngwa 11% Gbanyụọ
♥ 99% Obi Ụtọ
★ Enweghị ụgwọ ụtụ
Nabata na WoopShop.com. Mgbe ị na-achọgharị ma ọ bụ na-azụta n'aka WoopShop.com, a na-echebe ma kwanyere nzuzo gị na ozi gbasara gị. WoopShop.com na-enye gị ọrụ kachasị mma nye gị dabere na ọkwa, usoro na ọnọdụ edepụtara na ibe a.
1. amụma nzuzo
• WoopShop.com na-akwanyere nzuzo nke ndị ọbịa ọ bụla ma ọ bụ ndị ahịa nke weebụsaịtị ma jiri nchekwa ịntanetị gị kpọrọ ihe.
• WoopShop.com na-anakọta ozi ahụ gụnyere Email, Aha, Aha ụlọ ọrụ, Adreesị okporo ụzọ, Koodu Post, Obodo, Mba, Nọmba Ekwentị, Paswọdu na ndị ọzọ, iji bido, anyị na-eji kuki achọrọ iji chịkọta ma gbakọta na-abụghị. ozi amata gbasara ndị ọbịa bịara na saịtị anyị. Ihe omuma a di iche na nke gi. Ndị ọrụ nwere ike, n’agbanyeghi, gaa na saịtị anyị na-enweghị aha. Anyị ga-anakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ha ejiri aka ha nyefee anyị ozi dị otú ahụ. Ndị ọrụ nwere ike ịjụ ịnye ozi njirimara nke onwe ha, ewezuga na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ọrụ ụfọdụ metụtara saịtị.
• Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ site na ọtụtụ ụzọ, gụnyere, mana ọnweghị oke, mgbe ndị ọrụ bịara na saịtị anyị, debanye aha saịtị ahụ, tinye iwu, zaghachi nyocha, jupụta otu, yana na njikọ na ọrụ, ọrụ, atụmatụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme na saịtị anyị. Enwere ike ịrịọ ndị ọrụ maka, dị ka o kwesịrị, aha, adresị email, adreesị nzipu ozi.
• Anyị na-eji ozi ahụ iji nyere anyị aka imekwu ka ị dị mma iji, ịza arịrịọ ma ọ bụ mkpesa, iji nyere anyị aka igosi gị kachasị mkpa yana ichetara gị ozi ọhụrụ, ngwaahịa nwere ahịa, Kupọns, nkwalite pụrụ iche na ya. na.
• N’ime ndebanye aha gị, ị ga-akpali inye anyị aha gị, mbupu na adreesị ịgba ụgwọ, nọmba ekwentị, na adreesị ozi-e. A na-eji ụdị ozi nkeonwe ndị a maka nzube ịgba ụgwọ, iji mezuo iwu gị. Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu mgbe anyị na-ahazi usoro gị, anyị nwere ike iji ozi nkeonwe ị nyere ka ịkpọtụrụ gị.
• can nwere ike wepu aha site na ijikọ njikọ si na akwụkwọ akụkọ email ọ bụla ma ọ bụ na ntinye aha gị mgbe ịbanye.
• Anyị nwere ike ịnakọta ozi gbasara onwe gị gbasara ndị ọrụ mgbe ọ bụla ha na saịtị anyị nwere mmekọrịta. Ozi njirimara na-abụghị nke onwe ya nwere ike ịgụnye aha ihe nchọgharị, ụdị kọmputa na ozi teknụzụ banyere ụzọ ndị ọrụ si ejikọta saịtị anyị, dị ka sistemụ arụmọrụ na ndị na-eweta ọrụ ịntanetị na-eji ya na ozi ndị ọzọ yiri ya.
• Saịtị anyị nwere ike iji “kuki” bulie ahụmịhe Onye ọrụ. Ihe nchọgharị weebụ nke onye ọrụ na-etinye kuki na draịvụ ike ha maka ebumnuche idekọ ma mgbe ụfọdụ iji soro ozi gbasara ha. Ndị ọrụ nwere ike ịtọ ịtọ ihe nchọgharị weebụ ha iji jụ kuki ma ọ bụ dọọ gị aka na ntị mgbe a na-eziga kuki. Ọ bụrụ na ha mee nke a, rịba ama na akụkụ ụfọdụ nke saịtị ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
• WoopShop na-anakọta ma jiri ọrụ nke ndị ọrụ maka nzube ndị a:
(1) Iji hazie ahụmịhe onye ọrụ
Anyị nwere ike iji ozi ke nchịkọta ịghọta otú anyị Users dị ka otu ìgwè na-eji ọrụ na ego nyere na anyị Site.
(2) Imezi saịtị anyị
Anyị na-agbalịsi ike imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ anyị na-adabere na ozi na nzaghachi anyị na-enweta n'aka gị.
(3) Ka iwelie ọrụ ndị ahịa
Ozi gị na enyere anyị aka ịzaghachi ngwa ngwa na arịrịọ ndị ahịa na nkwado gị.
(4) Iji hazie azụmahịa
Anyị nwere ike iji ozi Ọrụ na-enye banyere onwe ha mgbe Ịtụkwasị ịtụ naanị inye ozi na iji. Anyị na-adịghị ekere òkè a ọmụma na-abụghị ndị ọzọ ma e wezụga ruo n'ókè dị mkpa iji nye ọrụ ahụ.
(5) Iji hazie ọdịnaya, nkwalite, nyocha ma ọ bụ atụmatụ saịtị ndị ọzọ
Ka izipu Ọrụ ọmụma ha kwetara na-enweta banyere isiokwu anyị na-eche ga-ịmasị ha.
(6) Ka izipu ozi oge
Adreesị ozi-e ndị ọrụ na-enye maka nhazi usoro, a ga-eji ha na-ezite ha ozi na mmelite gbasara usoro ha. Enwere ike iji ya mee ihe nzaghachi, na / ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ ma ọ bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na Onye ọrụ kpebiri ịbanye na listi nzipu ozi anyị, ha ga-enweta ozi-e nwere ike ịgụnye ozi ụlọ ọrụ, mmelite, ngwaahịa ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg. Ọ bụrụ na Onye ọ bụla chọrọ ịwepụ aha na ịnweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu, anyị gụnyere nkọwa zuru ezu. wepu aha ntuziaka na ala nke email ọ bụla ma ọ bụ Onye ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ anyị site n'Ịntanet anyị.
• Anyị na-anakọta mkpokọta data, echekwa, na nhazi usoro yana usoro nchekwa iji chebe nnabata, mgbanwe, ngosi ma ọ bụ mbibi nke ozi gbasara gị, aha njirimara, paswọọdụ, ozi azụmahịa na data echekwara na saịtị anyị.
Nnwere onwe na mgbanwe nke data dị n'etiti saịtị ahụ na ndị ọrụ ya na-agafe ọwa nkwukọrịta SSL echekwara ma chekwaa ya na akara ụbọchị dijitalụ.
Anyị anaghị ere, azụmaahịa, ma ọ bụ gbazite ozi njirimara nke ndị ọzọ na ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi igwe mmadụ gbasara ọnụọgụ mmadụ ejikọghị na ozi njirimara ọ bụla gbasara ndị ọbịa na ndị ọrụ anyị na ndị ọrụ azụmahịa anyị, ndị mmekọ tụkwasara obi na ndị mgbasa ozi maka ebumnuche edepụtara n'elu. Anyị nwere ike iji ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ iji nyere anyị aka rụọ ọrụ anyị na saịtị ma ọ bụ na-eduzi ihe omume anyị, dị ka izipu akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nyocha. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị n'etiti ndị ọzọ maka ebumnuche ndị a akachaghị anya maka na ị nyere anyị ikike gị.
• Ndị ọrụ nwere ike ịchọta mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na saịtị anyị nke jikọtara saịtị na ọrụ nke ndị mmekọ anyị, ndị na-eweta ngwaahịa, ndị mgbasa ozi, ndị na-enye nkwado, ndị na-enye ikike na ndị ọzọ. Anyị anaghị ejikwa ọdịnaya ma ọ bụ njikọ ndị na-egosi na saịtị ndị a ma anyị anaghị akpata omume maka omume ndị nrụọrụ weebụ jikọtara ma ọ bụ na saịtị anyị. Na mgbakwunye, saịtị ma ọ bụ ọrụ ndị a, gụnyere ọdịnaya ha na njikọ ha, nwere ike na-agbanwe mgbe niile. Saịtị na ọrụ ndị a nwere ike ịnwe amụma nzuzo ha na atumatu ọrụ ndị ahịa. Nchọgharị na mmekorita na weebụsaịtị ọ bụla, gụnyere weebụsaịtị nke nwere njikọ na saịtị anyị, dabere na usoro na usoro iwu nke saịtị ahụ.
• Paragraf Nzuzo Nzuzo a na-akọwa otu esi eji data nkeonwe na ọrụ ịkwụ ụgwọ Apple (Apple na-akwụ). Na mgbakwunye, ịkwesịrị ịgụ usoro na ọnọdụ Apple Pay. Ihe omume azụmahịa gị site na WoopShop emetụtaghị Apple Inc.
Mgbe ị jiri Apple Pay maka ịkwụ ụgwọ, ịnwere ike ịrịọ maka ozi kaadị akụ, njikwa ego na adreesị nzipu ozi, mana WoopShop agaghị anakọta ma chekwaa ozi ọ bụla na ụdị gị, agaghịkwa ekekọrịta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ. n'ụdị ọ bụla.
• WoopShop nwere ikike iji melite iwu nzuzo a n'oge ọ bụla. Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nyochaa peeji a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla iji nọrọ na-akọ banyere otu anyị si enyere aka ichedo ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Kwenyere ma kwenye na ọ bụ ọrụ gị ịtụle iwu nzuzo a kwa oge na ịmata mgbanwe.
• Site n'iji saịtị a, ị na-egosi nnabata gị nke iwu a. Ọ bụrụ n ịnyị ekwenyeghị n'iwu a, biko ejikwala saịtị anyị. Gị n’iji saịtị ahụ na-eso na nzipu nke mgbanwe na iwu a ga-ahụta na ịnabata mgbanwe ndị ahụ.
• Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Iwu Nzuzo a, omume nke saịtị a, ma ọ bụ mmekọrịta gị na saịtị a, biko kpọtụrụ anyị na [Email na-echebe] or [Email na-echebe]
2. Okwu & Ọnọdụ
• represent na-anọchi anya ma na-akwado na ị dịkarịa ala afọ 18 ma ọ bụ gaa na Saịtị n'okpuru nlekọta nke ndị mụrụ gị ma ọ bụ onye nlekọta. Will ga-aza naanị maka ịbanye na iji saịtị a site n'aka onye ọ bụla na-eji paswọọdụ na njirimara nke enyere gị ikike na ịnweta saịtị a ma ọ bụ iji ya.
• WoopShop.com nwere ike ibuga n'ụlọ nkwakọba ihe dị iche iche. Maka iwu nwere ihe karịrị otu ihe, anyị nwere ike kewaa usoro gị n'ọtụtụ nchịkọta dabere na ọkwa ngwaahịa na oke nke anyị. Daalụ maka nghọta gị.
• Ewezuga nke enyere na ebe ọzọ na ibe a ma ọ bụ na saịtị ahụ, ihe ọ bụla ị nyefere ma ọ bụ biputere na WoopShop.com, gụnyere enweghị mmachi, echiche, amamịghe, usoro, ajụjụ, nyocha, nkwupụta, na aro jikọtara ọnụ, aga-edo onwe ha n'okpuru. dị ka ihe nzuzo na-abụghị nke nzuzo, yana site na itinye ma ọ bụ biputere, ị kwenyere n'enyeghị ikike ịbanye na ikike IP niile metụtara ya na-ewepu ikike omume dị ka ikike sitere n'aka WoopShop.com na-enweghị ego na WoopShop ga-enweghị ikike ya.
• You gaghị eji adreesị ozi ịntanetị na-agha ụgha, mee ka à ga-asị na ị bụ onye ọzọ karịa onwe gị, ma ọ bụ na - eduhie WoopShop.com ma ọ bụ nke atọ maka mmalite nke ntinye ma ọ bụ Ọdịnaya ọ bụla. WoopSHop.com nwere ike, mana a gaghị amanye ya iwepu ma ọ bụ degharịa ihe ọ bụla gụnyere ntinye ma ọ bụ nyocha maka ebumnuche ọ bụla.
• Ihe odide niile, eserese, eserese ma ọ bụ ihe onyonyo ndị ọzọ, akara ngosi bọtịnụ, obere vidiyo, akara, slogans, aha ahia ma ọ bụ sọftụwia okwu na ọdịnaya ndị ọzọ na weebụsaịtị WoopShop.com, ọdịnaya, naanị nke WoopShop.com ma ọ bụ ọdịnaya kwesịrị ekwesị ya. ndi n’enye ahia. WoopShop.com chebere ikike niile ekwughi hoo haa. A ga-ekpe ndị na-emebi iwu ikpe ruo n'ókè iwu zuru oke.
• Biko mara na enwere ike ụfọdụ iwu anyị na-enweghị ike ịnabata ya ga-akagbu. Otu abụọ a kwenyere na, na-eso zipụ usoro, ụgbọ njem bụ naanị ọrụ nke ụlọ ọrụ ngwa agha ndị ọzọ. N'oge ọkwa a, ikike (ngwaahịa) nke ngwaahịa (s) niile dịịrị onye zụrụ ahịa ahụ; ihe nile metụtara na ihe egwu di na mgbe iga njem ga eburu onye ahia ahia ya.
• WoopShop.com nwere ike ịnwe njikọ nke saịtị ndị ọzọ na ịntanetị nke ndị ọzọ na-arụ ma na-arụ ọrụ ya. I kwenyere na WoopShop.com abụghị maka ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya dị na ma ọ bụ na saịtị dị otú ahụ.
• WoopShop.com nwere ikike ịgbanwe usoro ndị a na ọdịnihu na-enweghị ọkwa.
Oche ime ime Belt Adjuster 16.83€ - 37.89€
Okomoko igwe anaghị agba nchara elekere Quartz maka ụmụ nwoke
31.99€ - 37.04€
Igwe anaghị agba nchara kwa ụbọchị maka ndị nwanyị
Kasị Ahịa Taa
Wepụ Shoulder Boho Mkpịsị Aka Njikere Bipute Bipute Bipute 14.84€ 10.39€
3 Pcs / Lot Baby Waterproof Bibs Bandana Echebe Nchebe
Silver Trendy 925 Na-eme Ka Epeepe Ụkwụ Rhinestone ụkwụ
Egwuregwu Na-enweghị Ntanaka Igwefoto Bluetooth na-ekpuchi
Laptọọpụ Ngwaọrụ 360 Celsius nke Kwadoro Pụrụ Iche
29.49€ - 39.58€
Universal 2In1 Pocket Hand Warmer & USB Rechargeable Portable PowerBank
29.71€ - 40.91€
Nke kachasị elu taa
Cool Hip Hop kpochapụrụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ Men Denim Jeans Pant
27.45€ - 30.69€
50X200cm 19.7 "x78.7" Ebube 5D Ebube Ebube na-agbacha agbawa Carbon Fiber Vinyl Film Air
Kọlọtọ & Capsules Holder Ntanetị Ụlọ Elu Ọkwado na-adabere Nespresso
10.94€ - 18.52€
Woop! Ị na-ahụ na WoopShop.com na ụlọ ahịa na-azụ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị site na ịnye ndị ahịa ọnụahịa dị mma ma dị mma, ọnụahịa asọmpi, ahịa ndị dị elu, na ọrụ ndị ahịa na ndị ọrụ ha dị iche iche, na nke ọma ịzụ ahịa e-procurement iji kwalite ịzụta usoro. A na-ekesa WoopShop n'ụwa nile site na ụlọ ahịa anyị na mba dị iche iche na mba ndị ọzọ maka Free na ọtụtụ nde ndị ahịa na-ahụ anyị n'anya gburugburu ụwa, United States, Europe, North America, Middle East, wd. Adreesị: 1910 Thomes Avenue, Cheyenne, WY 82001
Online Ịzụ ahịa App
Ihe na-eme nke ọma & Ezi ahụmahụ na ngwa anyị
Ụlọ ahịa na obi ike
Enweghị Spam. Nanị Kupọns, Ngwá Ọrụ Ukwu, Ntanaka & More Nchekwa.
* -egosi achọrọ
WoopShop: Ebe Kachasị Elu maka Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nweta ahụmaahịa kachasị mma n'ịntanetị maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, na ụmụaka, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. WoopShop bụ ebe njedebe kacha mma maka ejiji na ụdị ibi ndụ, na-eburu ọtụtụ ngwa ahịa gụnyere uwe, akpụkpọ ụkwụ, ngwa, ọla, ngwaahịa nlekọta onwe onye na ọtụtụ ndị ọzọ. Oge eruola iji kọwaa ụdị nke gị na ihe anyị na-eburu ibu. Storelọ ahịa anyị dị n'ịntanetị na-ewetara gị ihe kachasị ọhụrụ na ngwaahịa ndị nrụpụta ogologo nke ụlọ ejiji. You nwere ike ịzụ ahịa n'ịntanetị na WoopShop site na nkasi obi nke ụlọ gị ma nyefee ọkacha mmasị gị kpọmkwem n'ọnụ ụzọ gị.
Ebe kachasị mma n'ịntanetị na Shoppingzụ ahịa na Ngwa E-Commerce Top Maka Ejiji
Bụrụ uwe, akwa akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ngwa, WoopShop na-enye gị ezigbo ngwakọta nke ejiji na arụmọrụ maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka. Will ga-amata na elu igwe bụ oke mgbe a bịara n’ụdị uwe ị nwere ike ịzụta maka oge dị iche iche.
Uwe ndị Smart - Na WoopShop ị ga-ahụ nhọrọ myriad na uwe elu na ọmarịcha smart, T-shirts na jeans, ma ọ bụ ngwakọta kurta na pajama maka ụmụ nwoke. Yiri uwe T-shirts e biri ebi. Mepụta akwa-na-campus vibe na varsity T-shirts na jeans nọ n'ahụhụ. O buru gingham, buffalo ma obu window nke pane, shirts nke eji enyocha bu nke nzuzu. Were ha na chinos, akwa mịrị amị ma ọ bụ akwa warara maka ọmarịcha ụzọ. Nwepuo maka ihe eji eme mara mma na jaketị biker. Gaa ihu ihu igwe ojii ma nwee obi ike na Jaketị ndị na-egbochi mmiri. Chọgharịa n'ime uwe ime anyị iji chọta uwe na-akwado nke ga-eme ka ị nwee ntụkwasị obi na ekike ọ bụla.
Uwe ụmụ nwanyị na-ewu ewu - shoppingzụ ahịa n'ịntanetị maka WoopShop bụ ahụmịhe na-ewuli elu. Lee hip ma nwee ahụ iru ala na chinos na mkpụmkpụ mkpụmkpụ n'oge ọkọchị a. Lee anya n'oge ụbọchị gị dị ka obere uwe ojii, ma ọ bụ họrọ akwa akwa maka sagon vibe. Uwe a na-ekechi ekechi na T-shirts na-anọchi anya mmụọ nke usoro ejiji. Họrọ n'etiti ọkacha mmasị gị n'etiti Bardot, out-shoulder, uwe elu uwe, blorsha, wuo na peplum n'elu, ịkpọ aha ole na ole. Were uwe jeans, sket ma ọ bụ palazzos dabara na ya. Kurtis na jeans na-eme ngwakọta zuru oke maka ndị mepere emepe dị mma. Nnukwu akwa anyị na nhọrọ lehenga-choli zuru oke iji mee ka a hụ ya na nnukwu nnọkọ oriri dị ka agbamakwụkwọ. Ihe anyị salwar-kameez, kurtas na Patiala suut na -eme nhọrọ dị mma maka eyi uwe mgbe niile.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ejiji - Ọ bụ ezie na uwe na-eme nwoke ahụ, ụdị akpụkpọ ụkwụ ị yi na-egosipụta àgwà gị. Anyị na-ewetara gị usoro nhọrọ dị mma dị na akpụkpọ ụkwụ nkịtị maka ụmụ nwoke dịka ndị na-agba snịịka na ndị loafers. Mee nkwupụta ike na ọrụ mgbe ị na-eyi brogues na oxfords. Omume maka marathon gị nwere akpụkpọ ụkwụ na-agba ọsọ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Họrọ akpụkpọ ụkwụ maka egwuregwu nkeonwe dịka tenis, bọọlụ, basketball na ihe ndị ọzọ. Ma ọ bụ banye ụdị ejiji na nkasi obi nke akpụkpọ ụkwụ, ihe mmịfe, na flop-flops. Choputa akpukpo ukwu anyi nke nwanyi na anya nwanyi nke gunyere pọmpu, akpukpo ukwu nke ukwu, ya na ya na ndi ozo. Ma ọ bụ jiri ọmarịcha ụlọ na ọla dị mma tọọ ụtọ.
Ngwa ndị siri ike - WoopShop bụ otu n'ime ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị mma maka ngwa mma ọmalịcha nke na-emeju uwe gị. Nwere ike ịhọrọ elele anaeti ma ọ bụ elekere dijitalụ ma jiri eriri na njikọ jikọ ha. Were akpa, sara akpa, na obere akpa iji chekwaa ihe ndị dị mkpa na ụdị. Ma ị masịrị obere obere ọla ma ọ bụ iberibe ma ọ bụ nke na-adọrọ adọrọ, nchịkọta ọla anyị n'ịntanetị na-enye gị ọtụtụ nhọrọ dị egwu.
Ọtọ na frolic - shoppingzụ ahịa n'ịntanetị maka ụmụaka na WoopShop bụ ọ joyụ zuru oke. Nwa gị nwanyị nta ga-ahụ ụdị akwa dị iche iche mara mma, akpụkpọ ụkwụ ballerina, isi na mkpịsị aka. Nwee obi ụtọ nwa gị nwoke site na bulie akpụkpọ ụkwụ egwuregwu, T-shirts superhero, jerseys football na ọtụtụ ihe ndị ọzọ si n'ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị. Nyochaa usoro egwuri egwu anyị nke ị nwere ike ịmepụta ncheta iji jiri ya kpọrọ ihe.
Mma na - amalite ebe a - can nwekwara ike ị nweta ume, tụgharịa ma gosipụta akpụkpọ ahụ mara mma site na nlekọta onwe gị, mma na ngwaahịa ndị ejiji si WoopShop Ekepụtara ncha nke mmiri, ihe nhicha mmiri, ude anụ ahụ, lotions, na ngwaahịa ayurvedic ndị ọzọ iji belata mmetụta ịka nká ma nye ahụmịhe nhicha ahụ dị mma. Debe ntutu gị ka ọ dị ọcha na ntutu gị nke nwere shampoos na ngwaahịa nlekọta ntutu. Họrọ etemeete iji welie mma eke gị.
WoopShop bụ otu n'ime saịtị ịzụ ahịa n'ịntanetị kachasị mma n'India nke nwere ike inye aka gbanwee oghere obibi gị kpamkpam. Tinye ụcha na udiri ime ụlọ gị nke nwere akwa akwa na ákwà mgbochi. Jiri smart tableware mee ka ndị ọbịa gị nwee mmasị. Ihe ndozi nke mgbidi, ogwe osisi, foto osisi, na osisi ndị siri ike ga - eku ume ndụ n'ime akụkụ ọ bụla nke ụlọ gị.
Uwe Ekeresimesi N’iru gi
WoopShop bụ otu n'ime saịtị ịzụ ahịa n'ịntanetị pụrụ iche n'ụwa ebe ejiji nwere ike ịnweta mmadụ niile. Lelee ndị bịara ọhụrụ iji lelee ụdị ejiji, akwa akpụkpọ ụkwụ, na ngwa ndị ọzọ dị n’ahịa. Nwere ike nweta aka gị na ụdị ejiji oge ọ bụla na-eyi. Alsonwekwara ike ị nweta ụdị agbụrụ kacha mma n'oge ememme niile nke ndị India. O doro anya na obi ga-atọ gị ụtọ maka ego anyị na-ego maka oge akpụkpọ ụkwụ, akpa, uwe elu, akpa na ihe ndị ọzọ. Re ere mgbe-aghacha a bu ihe kachasi nma mgbe ejiji riri oke ego.
Zụọ ahịa na ntanetị na WoopShop na ntụkwasị obi zuru ezu
Ihe ọzọ mere WoopShop ji bụrụ ụlọ ahịa kachasị n'ịntanetị bụ ntanetị zuru oke ọ na-enye. Nwere ike ịlele ụdị ọkacha mmasị gị na nhọrọ ọnụahịa maka ngwaahịa dị iche iche n'otu ebe. Ngwunye-enyi ga-eduzi gị na usoro nhọrọ gị. Chaatị nke zuru ezu, ozi ngwaahịa na onyonyo ogo dị elu nyere gị aka ime mkpebi kachasị mma. Inwekwara onwe gị ịhọrọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ gị, ọ bụrụ kaadị ma ọ bụ nnyefe ego. Iwu nloghachi nke ụbọchị 15 na-enye gị ike karịa dịka onye na-azụ ihe. Ọzọkwa, nhọrọ nzụta maka ịzụta ngwaahịa ahọrọ ndị ahịa ahịa dị ka ndị ọzọ n'ọkwa ọzọ.
Nwee ahụmịhe na-enweghị nsogbu ka ị na-azụta ụlọ gị na ebe obibi gị nke ọma. I nwekwara ike ịzụ ahịa maka ndị enyi gị, ezinụlọ gị na ndị ị hụrụ n'anya na-enweta ọrụ onyinye anyị maka oge pụrụ iche.
Budata ngwa ahịa ịntanetị anyị nke WoopShop dị ugbu a wee nweta ngwa ahịa E-commerce ka mma na ntinye pụrụ iche na uwe, ngwa, ngwa, ihe egwuregwu, drones, ndozi ụlọ, wdg. android | iOS